को हुन् मुख्यमन्त्री राईकी २७ वर्ष कान्छि हुनेवाला दुलही ? (८ तस्बिर/भिडियो) – Nayabook
को हुन् मुख्यमन्त्री राईकी २७ वर्ष कान्छि हुनेवाला दुलही ? (८ तस्बिर/भिडियो)
५० वर्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले र मिस मंगोल २०१८ की विजेता जाङ्मु इन शेर्पासंग विवाह गर्दैछन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही ११ माघमा लगनगाँठो कस्दैछन् । मुख्यमन्त्री राईको विवाहबारे उनको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राईको हुनेवाली को हुन् त ? विवाहको प्रसंग आएपछि धेरैलाई कौतुहलता लागेको हुन सक्छ । मुख्यमन्त्री राईको विवाहको मिति पक्का भइसक्दा समेत युवतीको नाम गोप्य नै राखिएको छ ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री राई सन् २०१८ की ‘मिस मंगोल नेपाल’ जाङ्मु इन शेर्पासँग लगनगाँठो कस्न लागेका हुन् । जाङ्मु इन शेर्पा र मुख्यमन्त्री राईको प्रेम विवाह हो ।
अमेरिका र युरोपमा यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । तर, नेपालमा भने पहिलोपटक बहालवाला मुख्यमन्त्रीले मोडलसँग विवाह गर्न लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईको पुर्खौली घर भोजपुर हो भने जाङ्मु संखुवासभाकी हुन् । उनी हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी छन् । उनका बाबु–आमा भने अमेरिकामा छन् ।
मुख्यमन्त्री राई र मोडल जाङ्मुको उमेरमा भने लगभग २७ वर्षको उमेको अन्तर रहेको बताइएको छ । ‘मिस मंगोल नेपाल–२०१८’ को उपाधि जितेसँगै जाङ्मु चर्चामा आएकी हुन् । त्यो बेलादेखि नै मुख्यमन्त्री राई र जाङ्मु नजिकिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२०६५ सालमा भोजपुरबाट सांसद बनेका राई त्यसयता लगातार राजनीतिमा उदाएकाले उनको विहे भने हुन सकेको थिएन । उनी २२ वर्षको बीचमा तत्कालिन एमालेको जिल्ला सचिव,अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिट्व्यूरो सदस्य र संघीय सरकारको मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौं र प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा शुभचिन्तक, राजनीतिकर्मी, उद्योगी र कर्मचारीलगायतलाई भोज दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।